Ciidamo ka tirsan Haramcad oo la sheegayo inay tacaddi kula kaceen weriyeyaal shaqadooda wata | Hadalsame Media
Home Wararka Ciidamo ka tirsan Haramcad oo la sheegayo inay tacaddi kula kaceen weriyeyaal...
Ciidamo ka tirsan Haramcad oo la sheegayo inay tacaddi kula kaceen weriyeyaal shaqadooda wata
(Muqdisho) 16 Feb 2022 – Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in weriyeyaal ka howlgala qaar kamid ah Talefishinada Madaxa-bannaan ay ku tacadiyeen Ciidamada Ammaanka DF Somalia.
Saxafiyiintan ayaa la sheegayaa inay doonayeen inay warar kasoo tebiyaan Saldhiga Degmada Kaxda oo ay xalay weerar ku qaadday kooxda Alshabaab.
Weriyeyaasha ayaa la sheegayaa in loo gaystey jirdil iyo xarig intii ay ku sugnaayeen Degmada Kaxda, sida uu faafinayo hilinka Universal TV.
Universal ayaa intaa raacisay in Ciidamada Haramcad ay yihiin kuwa jirdilkan u gaystay weriyeyaashan xilli ay ku guda jireen hawlohooda shaqo, waxaana sida sawirka ka muuqata lagu miigeeyey oo bogga loo dhigay dhulka inta shaararkii laga siibey iyada oo ay qorraxdu kulushahay, taasoo ka dhan ah xuquuqda insaanka iyo xorriyadda saxaafadda oo ku wada cad Dastuurka Somalia.
Arrintan ayaa ka dhigan in Ciidamadu ay diidayaan in laga hadlo ammaanka ay ku fashilmeen inay si fal-curin iyo fal-celinba leh wax uga qabtaan, iyadoo ciidamadan laftooda inta badan loo adeegsado arrimo siyaasadeed in ka badan inta ay ka qabtaan la dagaallanka Al Shabaab iyo sugitaanka ammaanka guud.
Previous articleDEG DEG: Guddoonkii Xiriirka K/cagta Somalia oo xilka isla casiley (Maxaa dhacay?)
Next articleRASMI: Guddoonka Xiriirka ee is casiley oo ku dhawaaqay cidda sii qabanaysa xilkii lagu muransanaa (Daawo)